Syntax arr.reduce(callbackFunction, [initialValue]) Gịnị ka belata eme? Belata bụ a ọrụ na anya nko site otu n'usoro. Operations nwere ike rụrụ na n'usoro via a callback ọrụ. Ná ngwụsị nke arụmọrụ na n'usoro, reduce returns a single value Reduce can be used, ọmụmaatụ, to total a shopping cart Example let arr…
Ka 9, 2018
Olee otú iji gbanyụọ 'atụghị Anya console nkwupụta.’ (ọ dịghị-console) na Eslint?
Iji gbanyụọ na 'atụghị Anya console nkwupụta.’ (ọ dịghị-console) njehie Eslint, ị na-achọ itinye a na-achị na .eslintrc.json file. Na iwu na ngalaba nke .eslintrc.json file tinye ndị na-esonụ akara: “ọ dịghị-console”:0 Nke a ga-gbanyụọ njehie. Ị nwere ike ime kama: “ọ dịghị-console”: “anya” Nke a ga-eme otu ihe ahụ, which is turn off any…